Huawei dia hanolotra ny telefaona mivalona ao amin'ny MWC 2019 | Androidsis
Huawei dia mitanisa antsika amin'ny hetsika amin'ny 24 Febroary ao amin'ny MWC
Manomboka miova ny MWC 2019 any Barcelona. Marika maromaro no efa nanamafy ny fisiany tamin'ny hetsika telephony malaza, toa ny LG, mampanantena izany fa hamela vaovao mahaliana ho antsika, na Sony, izay ho tonga miaraka amin'ireo finday avo lenta nohavaozina. Huawei dia ho eo amin'ny hetsika any Barcelona ihany koa. Ny marika sinoa dia efa nanambara ny fampisehoana voalohany nataony.
Koa satria ny marika sinoa izao dia nampakatra afisy milaza ny fisian'izy ireo ao amin'ny MWC 2019. Noho izany dia ho eo i Huawei amin'ny hetsika ary efa misy ny vinavina momba ny zavatra mety hatolotry ny orinasa. Betsaka ny milaza fa ny finday avo lenta an'ny marika no haseho.
Volana lasa izay Voalaza fa i Huawei dia afaka mampiseho ny finday avo lenta ao amin'ny MWC 2019. Saingy tsikelikely dia toa voamarina izany. Amin'izao fotoana izao ny marika sinoa dia miantso anay amin'ny hetsika amin'ny 24 febroary. Andro iray mialoha ny fanombohana ofisialy, saingy marika marobe no manararaotra manolotra ny vaovaony.
Amin'ny fanasana nalefan'ny marika sinoa, izay hitanao eo am-piandohana, afaka mahita fitaovana azo avadika isika. Ho fanampin'ny fananana jiro, izay mety ho ny efijery amin'ny lafiny roa. Ny zoro fanokafana dia tsy azo atao koa raha avy amin'ny telefaona mahazatra. Noho izany dia mahagaga fa ny telefaonanao mivalona.
Ity fampisehoana ity dia ho tonga andro vitsivitsy taty aoriana noho ny an'ny finday avo lenta an'ny Samsung, izany dia hatao ny 20 febroary. Noho izany, Ny fanatrehan'i Samsung ao amin'ny MWC 2019 dia toa tsy misy resaka intsony. Inona no mamela ny lazan'ireo marika toa an'i Huawei miaraka amin'ireo maodeliny. Tsy fantatsika raha mbola hisy telefaona hafa ankoatr'ity iray ity avy aminy.
Na ahoana na ahoana, amin'ny 24 Febroary amin'ny 14:00 tolakandro dia misy fotoana iarahana amin'ny Huawei. Ny marika sinoa dia hanolotra ny finday avo lenta vaovao, izay mety ho finday mivalona. Hihaino tsara ireo vaovao vaovao tonga momba an'ity fitaovana ity sy ity fampisehoana marika ity izahay. Inona araka ny hevitrao no hatolotr'izy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei dia mitanisa antsika amin'ny hetsika amin'ny 24 Febroary ao amin'ny MWC
Ho tonga ny Vivo V15 Pro miaraka amin'ny fakan-tsary telo sy sensor pop-up [Afisy Ofisialy]